Shirka 37aad ee Midowga Idaacahada Dowladaha Carabta oo la soo gabo gabeeyay “SAWIRRO” – Radio Muqdisho
Shirka 37aad ee Midowga Idaacahada Dowladaha Carabta oo la soo gabo gabeeyay “SAWIRRO”
Shirka 37aad ee Midowga Idaacadaha dowladaha Carabta ayaa maanta lagu soo gabo gabeeyay magaalada Tunis ee caasimadda Dalka Tunisia, kaasi oo looga hadlayay horumarinta Warbaahinta Carabta iyo sidii loo tayeyn lahaa.
Kulanka oo mid sanadkiiba mar la qabto isla markaana socday 11-ka ilaa iyo 13-ka oo ah muddo saddex cisho ayaa waxaa lagu casuumay oo ka qeyb galay Agaasimeyaasha Idaacadaha iyo Telefishinada dowladaha Carabta, quburo, Wakiilo ka socday ururada iyo xubno matalayay Hay’adaha Warbaahinta Yurub oo shirka lagu casuumay.
Gabo gebada shirka waxaa laga soo saray Warmurtiyeed, kaasi oo lagu cadeeyay taageero ay siinayaan Madaxdii shirka ka qeyb gashay Warbaahinta Soomaaliya, gaar ahaan qalab iyo tababarid shaqaale, si sare loogu qaado aqoonta iyo xirfadda suxufiyiinta Soomaaliyeed.
Shirka waxaa dhanka Soomaaliya uga qeyb galay Wafdi uu hogaaminayo Agaasimaha Radio Muqdisho Mudane Cabdifataax Daahir Jeyte, oo ay ka midyihiin Eng, Fu’aad Muxudiin Khaliif, Fiidow Maxamuud Fiidow, kuwaasi oo markii uu shirka soo idlaaday kaddib kulamo gaar gaar ah la qaatay qaar ka mid ah Agaasimeyaashii shirka ka qeyb galay.
Golaha Shacabka oo ansixiyay Misaaniyadda Dowlada 2018
Shirweynaha Qaran ee Xeer-Ilaaliyeyaasha Soomaaliyeed oo la soo gabo gabeeyay “SAWIRRO”
Shirweynaha Qaran ee Xeer-Ilaaliyeyaasha Soomaaliyeed oo la soo gabo gabeeyay "SAWIRRO"